How to use Myanmar Font in Chrome — MYSTERY ZILLION
How to use Myanmar Font in Chrome
October 2012 edited October 2012 in Daily Life
Chrome သုံးတာ တချို့ Site တွေက မြန်မာစာ ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာ ဘာ setting ချိန်ရမှာပါလဲ
setting>show advance setting>Web content အောက်မှာ font ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ font ကိုရွေးသုံးပါ။
Chrome မှာ customize fonts လုပ်တဲ့အခါ Fonts အားလုံးကို Zawgyi-One ထားပြီးရင် Encoding မှာ <strong>Unicode (UTF-8)</strong> ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အကုန်ပြောင်းထားပါတယ်.......URL မှာလဲ မြန်မာလိုရိုက်ရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ.....site တစ်ခုထဲမှာကို မြန်မာလိုနဲ့ ပေါ်တဲ့ စာနဲ့. လေးထောင့်ကွက်ပါတဲ့စာနဲ့ ပေါ်နေတာပါ......
Printscreen ဖမ်းပြီး ပြလို့ရမလားဗျ? အစ်ကိုပြောတာ မျက်စိထဲ မမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
တောင်းပန်ပါတယ်.......prtscreen ဖမ်းပြီး Attach ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ
You can't setting in Chrome for chrome's address bar.
User/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/User StyleSheets အောက်မှာ Custom.css ကို အောက်က Code တွေနဲ့ ဖန်တီးလိုက်ရင် ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါလေး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ အစ်ကို.... မြန်မာမိသားစုမှာ ဆွေးနွေးထားကြတာလေးကို ပြောပေးတာပါ။ ကုဒ်တွေကို ပိုကောင်းအောင် ပြင်နိုင်ယင် ပိုအဆင်ပြေမလား မသိဘူး....
ပုံကြည့်ရန် >> http://i.minus.com/ib2GQPcewTIgaY.png
font-family: Zawgyi-one, myanmar3;
In chrome version 23.0.1271.64 , you can change the font easily
go to setting > Show Advance Setting > Customize Font (Under Web Content)
ကျေးဇူးပါ အစ်ကို... အယင်ဗားရှင်းတွေတုန်းက မရခဲ့တော့ Custom.css နဲ့ သုံးခဲ့တာပါ။ အခုတော့ မလိုတော့ပါဘူး။ Ubuntu 12.04 အတွက် Chrome မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် အဆင်ပြေမဲ့ နည်းလေးရှိယင်လည်း ပြောပေးပါဦး အစ်ကို။ တချို့စာလုံးတွေက သိပ်အဆင်မပြေလို့ပါ။
Window 8 မှာ ဖေ့ဘွတ်က Google Chrome ပေါ်မှာ မြန်မာစာတွေမပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ် စာတွေနေရာမှာ ဒီတိုင်းBlank တွေဖြစ်နေပါတယ် ကူညီပေးပါဦး